1, 2. (a) Ɔkwan bɛn so na Mediani Dario hyehyɛɛ n’ahemman a na emu atrɛw no? (b) Ka amantam ahene nnwuma ne wɔn tumi ho asɛm.
BABILON ahwe ase! Wɔama anuonyam a ɔde mfe ɔha anya sɛ wiase tumi no aba awiei wɔ nnɔnhwerew kakraa bi mu. Afei bere foforo refi ase—Mediafo ne Persiafo bere. Sɛ nea obedii Belsasar ade no, afei de na ɛsɛ sɛ Mediani Dario yɛ adwumaden de hyehyɛ n’ahemman a emu atrɛw no.
2 Nnwuma a edi kan a Dario yɛe no mu biako ne sɛ ɔpaw amantam ahene 120. Wogye di sɛ ɛtɔ mmere bi a, na wɔpaw wɔn a wokura dibea yi fi ɔhene no abusuafo mu. Sɛnea ɛte biara no, na ɔmantam hene biara di ɔmantam kɛse bi anaa ahemman no fã bi a esua so. (Daniel 6:1) Na nnwuma a ɔyɛ no bi ne sɛ ogyigye tow de kɔ ahemfie. Ɛwom sɛ na ɔhene no nanmusifo bi kɔhwehwɛ ɔmantam hene no nneɛma mu wɔ bere ne bere mu de, nanso na ɔwɔ tumi kɛse. N’abodin no kyerɛ sɛ “Ahenni no bammɔfo.” Na wobu ɔmantam hene sɛ ɔhene kumaa wɔ ne mantam mu a ɔhempɔn no nkutoo na ɔwɔ tumi sen no.
3, 4. Dɛn nti na na Dario pɛ Daniel asɛm, na ɔhene no maa no dibea bɛn?
3 Dɛn na Daniel bɛyɛ wɔ nhyehyɛe foforo yi mu? So Mediani Dario bɛma Yudani diyifo akwakoraa a wadi mfe aduakron ne akyi yi agyae n’adwuma a ɔyɛ no? Dabida! Akyinnye biara nni ho sɛ Dario hui sɛ Daniel hyɛɛ Babilon asehwe ho nkɔm pɛpɛɛpɛ, na na nkɔmhyɛ a ɛte saa no gye nhumu a ɛkyɛn onipa de. Afei nso, na Daniel de mfe pii anya osuahu wɔ di a ɔne nnommum a wofi aman ahorow mu a wɔwɔ Babilon di no mu. Na Dario pɛ sɛ ɔma asomdwoe tra ɔne ne manfo a odii wɔn so nkonim nkyɛe no ntam. Enti, na ɛda adi sɛ ɔbɛpɛ sɛ onya obi a ɔwɔ nyansa ne osuahu te sɛ Daniel wɔ ahengua no ho. Na ama wayɛ dɛn?
4 Sɛ Dario paw Yudani dommum Daniel sɛ ɔmantam hene mpo a, anka ɛbɛyɛ nwonwa. Enti hwɛ gyegyeegye a ɛkɔɔ so bere a Dario de ne gyinaesi too gua sɛ ɔbɛyɛ Daniel abirɛmpɔn baasa a wɔbɛhwɛ amantam ahene no so mu biako no! Ɛnyɛ ɛno nko, na Daniel “reda no adi bere nyinaa sɛ ɔda nsow,” ɔkyerɛe sɛ ɔkorɔn kyɛn ne mfɛfo abirɛmpɔn no. Nokwarem no, wohuu “honhom a ɛkyɛn so” wɔ ne mu. Na Dario pɛ sɛ ɔyɛ no ɔmampanyin mpo.—Daniel 6:2, 3, NW.
5. Dɛn na ɛbɛyɛ sɛ abirɛmpɔn ne amantam ahene afoforo no yɛe wɔ dibea a wɔde maa Daniel no ho, na dɛn ntia?
5 Ɛbɛyɛ sɛ na abirɛmpɔn ne amantam ahene a aka no bo afuw. Na adwene a ɛne sɛ wɔbɛma Daniel—a ɔnyɛ Mediani anaa Persiani anaa ɔhene no busuani—adi wɔn so tumi no haw wɔn! Ɔkwan bɛn so na Dario betumi atwa ne manfo, n’abusua mpo ho ama ɔhɔho dibea kɛse saa? Na ɛte sɛ nea adeyɛ a ɛte saa mfata. Afei nso, ɛda adi sɛ amantam ahene no buu Daniel nokwaredi no sɛ ade a esiw wɔn dwowtwa ne ɔporow no ho kwan. Nanso, abirɛmpɔn ne amantam ahene no annya akokoduru ankohu Dario wɔ asɛm no ho. Asɛm no ne sɛ na Dario bu Daniel kɛse.
6. Ɔkwan bɛn so na abirɛmpɔn ne amantam ahene no bɔɔ mmɔden sɛ wɔbɛsɛe Daniel din, na dɛn nti na mmɔdenbɔ yi ankosi hwee?
6 Enti amammuifo ahoɔyawfo yi bɔɔ pɔ bɔne bi. Wɔbɔɔ mmɔden sɛ “wobehu Daniel ho asɛm bi, ahenni no fam.” So ebetumi aba sɛ ɔkwan a ɔfa so di n’asɛyɛde ahorow ho dwuma ho wɔ asɛm? Onni nokware? Na abirɛmpɔn ne amantam ahene no ntumi nhu anibiannaso anaa ɔporɔw biara wɔ ɔkwan a na Daniel fa so yɛ ne nnwuma ho. Wɔkae sɛ: “Yɛrennya Daniel yi ho asɛm biara, gye sɛ yehu bi ne Nyankopɔn mmara ho.” Enti nnipa bɔne yi bɔɔ pɔw bi wɔ eyi ho. Na wosusuw sɛ ɛbɛma wɔayi Daniel afi hɔ koraa.—Daniel 6:4, 5.
WƆBƆ AWUDI HO PƆW
7. Asɛm bɛn na abirɛmpɔn ne amantam ahene no de kɔtoo ɔhene no anim, na wɔyɛɛ saa wɔ ɔkwan bɛn so?
7 Abirɛmpɔn ne amantam ahene ‘tuu bum kɔtoaa’ Dario. Aram asɛm a wɔde dii dwuma wɔ ha no kyerɛ sɛ wɔde gyegyeegye kɛse na ɛkɔe. Ɛda adi sɛ nnipa yi ma ɛbɛyɛɛ sɛ wɔwɔ asɛnhia a egye ntɛmpɛ bi a wɔbɛka akyerɛ Dario. Ebia wonyaa adwene sɛ sɛ wɔde ahotoso da wɔn asɛm no adi sɛ nea ehia sɛ wodi ho dwuma ntɛm a, ɛremma n’adwene mu nyɛ no nãã pii. Enti, wɔkaa asɛm no tẽẽ sɛ: “Ahemman yi abirɛmpɔn, mmakoma, amantam ahene, agyinafo ne amradofo nyinaa atu agyina sɛ wɔde ɔhene mmara bɛbara na wɔahyɛ ɛmom [mmara, NW] sɛ: Obiara a obebisa onyame bi anaa onipa bi hɔ ade biara adaduasa yi, gye wo, ɔhene, hɔ no, wɔde no bɛto agyata amoa mu.” *—Daniel 6:6, 7.
8. (a) Dɛn nti na na Dario ani begye mmara a wɔkae sɛ ɔnhyɛ no ho? (b) Na atirimpɔw ankasa bɛn na abirɛmpɔn no kura?
8 Abakɔsɛm kyerɛwtohɔ ahorow si so dua sɛ na wɔtaa bu Mesopotamia ahene sɛ anyame na wɔsom wɔn. Enti akyinnye biara nni ho sɛ asɛm yi maa Dario tirim yɛɛ no dɛ. Ɛbɛyɛ sɛ ohui nso sɛ mfaso wɔ so. Kae sɛ na wɔn a wɔte Babilon no bu Dario sɛ ɔhɔho ne obi a waba hɔ foforo. Na mmara foforo yi bɛma wɔagye no atom sɛ ɔhene, na na ɛbɛhyɛ nnipa bebree a wɔte Babilon no nkuran ma wɔadi nokware ama nniso foforo no na wɔagyina akyi. Nanso, bere a amantam ahene no kae sɛ wɔnhyɛ mmara no, na ɛnyɛ ɔhene no yiyedi ho koraa na wodwen. Na wɔn botae ankasa ne sɛ wobesum Daniel afiri, efisɛ na wonim sɛ ɛyɛ ne su sɛ ɔbɔ Onyankopɔn mpae mprɛnsa da biara wɔ n’abansoro dan mfɛnsere a wabue no ano.
9. Dɛn nti na na mmara foforo no renhaw nnipa a wɔnyɛ Yudafo no dodow no ara no?
9 So mpaebɔ ho anohyeto yi bɛyɛ ɔhaw ama Babilon nyamesomfo nyinaa? Ɛnte saa ankasa, efisɛ ne titiriw no, na mmara no bedi ɔsram biako pɛ. Afei nso, na nnipa a wɔnyɛ Yudafo kakraa bi na wobebu onipa a wɔsom no sɛ adeyɛ a ebu mmara so. Bible ho nimdefo bi ka sɛ: “Na ahene a wɔbɛsom wɔn sɛ anyame no nyɛ ahyɛde foforo mma aman a abosonsom adi wɔn ti yiye no; ma enti bere a wɔka kyerɛɛ Babilonfo no sɛ wɔmfa ɔsom a wɔde ma anyame mma nkonimdifo—Mediani Dario—no, wɔyɛɛ saa ntɛm ara. Yudani no nkutoo na wampene ahyɛde a ɛte saa so.”
10. Mediafo ne Persiafo buu mmara a wɔn hene no hyɛe no dɛn?
10 Sɛnea ɛte biara no, wɔn a wɔkɔɔ Dario nkyɛn no hyɛɛ no nkuran sɛ ‘ɔmma wonkurukyerɛw kyerɛw a wɔrensakra, sɛ Media ne Persia mmara a wɔnnan ani no te no.’ (Daniel 6:8) Wɔ tete Apuei fam no, na wɔtaa bu ɔhene ahyɛde sɛ ɛnsɛ sɛ wɔsakra no. Eyi ma wonyaa adwene sɛ ɔnyɛ bɔne. Na ɛnsɛ sɛ wɔsakra mmara a ebetumi ama wɔakum nnipa a wɔn ho nni asɛm no mpo!
11. Na Dario mmara no bɛka Daniel dɛn?
11 Dario de ne nsa hyɛɛ mmara no ase a wannwen Daniel ho. (Daniel 6:9) Bere a ɔyɛɛ saa no, na onnim sɛ ɔrehyɛ mmara a ebetumi ama wɔakum ne bapɔmma a ɔsom bo paa ma no no. Yiw, akyinnye biara nni ho sɛ na mmara no bɛkyekyere Daniel.
WƆHYƐƐ DARIO MA OBUU NO FƆ
12. (a) Bere a Daniel tee mmara foforo no ho asɛm ara pɛ no, dɛn na ɔyɛe? (b) Na henanom na wɔrehwɛ Daniel, na dɛn ntia?
12 Ankyɛ na Daniel huu mmara a ɛbara mpaebɔ no. Ɔkɔɔ ne fie ntɛm ara kɔhyɛn n’abansoro dan a wabue ne mfɛnsere ano kyerɛ Yerusalem no mu. * Ɛhɔ na Daniel fii ase bɔɔ Onyankopɔn mpae “sɛ ɔyɛ kan no ara.” Ebia Daniel susuwii sɛ ne nkutoo na ɔwɔ hɔ, nanso na atirisopamfo no rehwɛ no. ‘Wɔbɛtoaa no’ mpofirim, a ɛda adi sɛ wɔyɛɛ gyegyeegye te sɛ nea wɔyɛe bere a wɔkɔɔ Dario nkyɛn no. Afei wɔde wɔn aniwa ankasa rehu—Daniel ‘rebisa Onyankopɔn hɔ ade.’ (Daniel 6:10, 11) Na abirɛmpɔn no ne amantam ahene no anya adanse a wohia na wɔde abɔ Daniel sobo wɔ ɔhene no anim no nyinaa.
13. Asɛm bɛn na Daniel atamfo kɔka kyerɛɛ ɔhene no?
13 Daniel atamfo no de anitew bisaa Dario sɛ: “So woanhyɛ ɛmom sɛ onipa biara a obebisa onyame anaa onipa biara hɔ ade adaduasa yi, gye wo, ɔhene, hɔ no, wɔde no bɛto agyata amoa mu?” Dario buae sɛ: “Asɛm no atim sɛ Media ne Persia mmara a wɔnnan ani no te.” Afei atirisopamfo no kaa nea asi no ankasa ntɛm ara. “Daniel a ofi Yuda atukɔfo mu no mmu wo, ɔhene, ne ɛmom a woahyɛ no, na ɔsrɛ n’adesrɛ da koro mprɛnsa.”—Daniel 6:12, 13.
14. Ɛda adi sɛ dɛn nti na abirɛmpɔn ne amantam ahene no kae sɛ Daniel ‘fi Yuda atukɔfo mu’?
14 Abirɛmpɔn ne amantam ahene no anka sɛ Daniel ‘fi Yuda atukɔfo no mu’ kwa. Ɛda adi sɛ na wɔpɛ sɛ wosi so dua sɛ Daniel yi a Dario ama no dibea kɛse saa no yɛ Yudani akoa kɛkɛ. Na wogye di sɛ ɛno nti, na ɔhyɛ mmara no ase ɔkwan biara so—ɛmfa ho sɛnea ɔhene no te nka wɔ ne ho!
15. (a) Dɛn na Dario yɛe wɔ asɛm a abirɛmpɔn ne amantam ahene no bɛka kyerɛɛ no no ho? (b) Ɔkwan bɛn so na abirɛmpɔn ne amantam ahene no san buu Daniel animtiaa?
15 Ebia abirɛmpɔn ne amantam ahene no hwɛɛ kwan sɛ ɔhene no bɛbɔ wɔn aba so sɛ wɔnam anifere so atumi akyere obi. Sɛ saa a, ɛnde na wɔn ho bedwiriw wɔn. Asɛm a wɔbɛka kyerɛɛ Dario no haw no yiye. Sɛ anka Dario bo befuw Daniel anaasɛ ɔbɛma wɔde no akɔto agyata amoa mu ntɛm ara no, ɔbɔɔ mmɔden da mũ nyinaa sɛ obegye no. Nanso ne mmɔdenbɔ no ankosi hwee. Ankyɛ na atirisopamfo no san bae bɛkae sɛ wonkum Daniel a anyɛ wɔn aniwu.—Daniel 6:14, 15.
16. (a) Dɛn nti na na Dario bu Daniel Nyankopɔn no? (b) Anidaso bɛn na na Dario wɔ ma Daniel?
16 Dario tee nka sɛ ontumi nyɛ asɛm no ho hwee. Ontumi nnan mmara no ani, na ontumi mfa Daniel ‘mmarato’ mfiri no nso. Nea Dario tumi ka kyerɛɛ Daniel nyinaa ne sɛ “wo Nyankopɔn a wosom no daa yi no, ɔno na onnye wo.” Na ɛte sɛ nea Dario bu Daniel Nyankopɔn no. Ɛyɛ Yehowa na ɔmaa Daniel tumi ma ɔhyɛɛ Babilon asehwe ho nkɔm. Na Onyankopɔn ama Daniel “honhom a ɛkyɛn so” a ɛma ɔda nsow wɔ abirɛmpɔn afoforo no ho. Ebia na Dario nim sɛ Onyankopɔn koro yi ara gyee Hebrifo mmerante baasa fii ogya a ɛrefram fononoo mu wɔ mfe pii a atwam no mu. Ebetumi aba sɛ na ɔhene Dario wɔ anidaso sɛ Yehowa begye Daniel saa bere no, efisɛ na ontumi nnan mmara a ɔde ne nsa ahyɛ ase no ani. Enti, wɔtow Daniel kyenee agyata amoa mu. * Afei, “wɔde ɔbo bi bae bɛtoo amoa no ano, na ɔhene de ne pɛtea, ne n’abirɛmpɔn mpɛtea sɔɔ ano, na wɔansakra Daniel ho ade biara.”—Daniel 6:16, 17.
ASƐM NO DAN WƆ ANWONWAKWAN SO
17, 18. (a) Dɛn na ɛkyerɛ sɛ na Dario ahaw wɔ Daniel tebea no ho? (b) Dɛn na esii bere a ɔhene no san kɔɔ agyata no amoa ano anɔpa no?
17 Dario a na wabotow no san kɔɔ n’ahemfie. Wamma wɔamfa nnwontofo biara amma n’anim, efisɛ na ɔmpɛ koraa sɛ obegye n’ani. Mmom no, Dario sii pɛ anadwo mũ nyinaa, dii abuada. “N’ani saree dwe.” Dario yɛɛ ntɛm kɔɔ agyata amoa no ano ahemadakye. Ɔde awerɛhow nne teɛɛm sɛ: “Daniel, Onyankopɔn teasefo no akoa, wo Nyankopɔn a wosom no daa yi atumi agye wo afi agyata no anom anaa?” (Daniel 6:18-20) Nea ɛyɛɛ no nwonwa—na ne ho tɔɔ no koraa—no, ɔtee mmuae bi!
18 “Ɔhene nnya nkwa daa!” Daniel nam obu a ɔde kyiaa ɔhene no so kyerɛe sɛ na onni ne ho menasepɔw biara. Ohui sɛ ɛnyɛ Dario ankasa na ɔma ohyiaa ɔtaa no na mmom abirɛmpɔn ne amantam ahene ahoɔyawfo no. (Fa toto Mateo 5:44; Asomafo no Nnwuma 7:60 ho.) Daniel toaa so sɛ: “Me Nyankopɔn asoma ne bɔfo ma wɔabemuamua agyata no ano, na wɔanyɛ me hwee, efisɛ wahu me sɛ midi bem n’anim, na wo, ɔhene, anim nso menyɛɛ bɔne bi ɛ.”—Daniel 6:21, 22.
19. Ɔkwan bɛn so na na Dario abirɛmpɔn ne amantam ahene no adaadaa no?
19 Hwɛ sɛnea ɛbɛyɛ sɛ saa nsɛm no haw Dario ahonim! Na onim pefee sɛ Daniel nyɛɛ hwee a ɛsɛ sɛ wɔtow no kyene agyata amoa mu. Na Dario nim yiye sɛ abirɛmpɔn ne amantam ahene no abɔ pɔw sɛ wɔbɛma wɔakum Daniel na na wɔadaadaa ɔhene no na wɔanya nea wɔhwehwɛ no. Esiane sɛ wɔka sii so dua sɛ ‘ahenni no mu abirɛmpɔn nyinaa’ akamfo akyerɛ sɛ wɔnhyɛ mmara no nti, na wɔkyerɛ sɛ wokohuu Daniel nso wɔ asɛm no ho. Na Dario ne nnipa bɔne yi bedi akyiri yi. Nanso, nea edi kan no, ɔhyɛe sɛ wonyi Daniel mfi agyata amoa no mu. Nea na ɛyɛ nwonwa ne sɛ wɔanhu sɛ biribi ketewaa bi mpo ati Daniel ho!—Daniel 6:23.
20. Dɛn na ɛtoo Daniel atamfo a na wɔwɔ ne ho adwemmɔne no?
20 Afei a Daniel anya ne ti adidi mu yi, na Dario wɔ nnwuma foforo a ɛsɛ sɛ ɔyɛ. “Na ɔhene kae ma wɔde mmarima a wɔtotoo Daniel ano no bae de wɔn beguu agyata amoa no mu, wɔn ne wɔn mma ne wɔn yerenom; na wonnya nnuu amoa no ase no, agyata no faa wɔn so, na wɔbobɔɔ wɔn nnompe nyinaa mu.” *—Daniel 6:24.
21. Na nsonsonoe bɛn na ɛwɔ Mose Mmara ne tete aman bi mmara mu wɔ sɛnea wɔne nnebɔneyɛfo mmusua dii no ho?
21 Ebia ɛte sɛ nea atirisopamfo no yerenom ne wɔn mma a wokunkum wɔn kaa wɔn ho no yɛ atirimɔdenne kɛse. Nea ɛne eyi bɔ abira no, Mmara a Onyankopɔn nam Mose so de mae no kae sɛ: “Wonnkum agyanom mmpae mma so, na wonnkum mma mmpae agyanom so; onipa ankasa bɔne nti na wonkum no.” (Deuteronomium 24:16) Nanso, wɔ tete aman bi mu no, na wɔtaa kum ɔdebɔneyɛfo no abusuafo ka ne ho, bere a ne bɔne no yɛ nea anibere wom no. Ebia wɔyɛɛ eyi na amma n’abusuafo no antumi antɔ were akyiri yi. Nanso, ɛnyɛ Daniel na ɔma wɔyɛɛ abirɛmpɔn no ne amantam ahene no abusuafo no saa. Ebetumi aba sɛ amanehunu a nnipa abɔnefo yi de baa wɔn mmusua so no haw no.
22. Mpaemuka foforo bɛn na Dario yɛe?
22 Na abirɛmpɔn ne amantam ahene atirisopamfo no awuwu. Dario hyɛɛ mmara sɛ: “Mehyɛ mmara sɛ m’ahemman a midi so tumi nyinaa mu, wɔmfɛre na wonsuro Daniel Nyankopɔn, na ɔno ne Onyankopɔn a ɔte ase na ogyina hɔ daa, na n’ahenni yɛ nea ɛnsɛe da, na ne tumi bɛtra hɔ akosi ase. Ɔne nea oyi na ogye, na ɔyɛ nsɛnkyerɛnne ne anwonwade ɔsoro ne asase so, ɔno na oyii Daniel agyata nsam.”—Daniel 6:25-27.
SOM ONYANKOPƆN DAA
23. Nhwɛso bɛn na Daniel yɛe wɔ n’adwuma ho, na yɛbɛyɛ dɛn atumi ayɛ te sɛ ɔno?
23 Daniel yɛɛ nhwɛso pa maa Onyankopɔn nnɛyi asomfo nyinaa. Bere nyinaa na asɛm biara nni ne ho. Wɔ Daniel honam fam adwuma mu no, “wɔannya asɛm anaa bɔne biara.” (Daniel 6:4) Saa ara nso na ɛsɛ sɛ Kristoni yɛ nsi wɔ n’adwuma mu. Eyi nkyerɛ sɛ ɔbɛyɛ adwumawura otirimɔdenfo a odi ahonyade akyi denneennen anaa obu n’ani gu afoforo so na ama wanya dibea. (1 Timoteo 6:10) Kyerɛwnsɛm no hwehwɛ sɛ Kristoni fi ne kra nyinaa mu de nokwaredi di ne honam fam asɛde ho dwuma, te ‘sɛ nea ɔyɛ ma Yehowa.’—Kolosefo 3:22, 23; Tito 2:7, 8; Hebrifo 13:18.
24. Ɔkwan bɛn so na Daniel daa no adi sɛ ogyina pintinn wɔ ne som mu?
24 Daniel gyinaa pintinn wɔ ne som mu. Na ɔmanfo nim sɛ ɔbɔ mpae daa. Afei nso, na abirɛmpɔn ne amantam ahene no nim yiye sɛ Daniel ntoto ne som ase. Nokwarem no, na wogye di sɛ sɛ mmara bi bara adeyɛ yi mpo a, ɔbɛkɔ so ayɛ. Nhwɛso pa ma nnɛyi Kristofo bɛn ara ni! Wɔn nso wɔagye din sɛ wɔde Onyankopɔn som di kan. (Mateo 6:33) Ɛsɛ sɛ afoforo hu eyi ntɛm ara efisɛ Yesu hyɛɛ n’asuafo sɛ: “Momma mo kanea nhyerɛn nnipa anim, na wɔahu mo nneyɛe pa, na wɔahyɛ mo agya a ɔwɔ soro no anuonyam.”—Mateo 5:16.
25, 26. (a) Dɛn na ebinom betumi aka wɔ nea Daniel yɛe no ho? (b) Dɛn nti na Daniel buu nsakrae a na ɔbɛyɛ wɔ nea na ɔyɛ no mu sɛ ɛkyerɛ sɛ wannyina pintinn?
25 Ebia ebinom bɛka sɛ anka Daniel betumi akwati ɔtaa denam Yehowa a ɔbɛbɔ no mpae wɔ kokoam wɔ nnafua 30 no mu no so. Mpaebɔ de, enhia gyinabea pɔtee bi na Onyankopɔn atie. Obetumi ahu obi komam nsusuwii mpo. (Dwom 19:14) Nanso, Daniel buu adeyɛ yi a ɔbɛsakra no no sɛ ɛkyerɛ sɛ wannyina pintinn. Dɛn ntia?
26 Esiane sɛ na nkurɔfo nim yiye sɛ Daniel bɔ mpae daa nti, adwene bɛn na anka wobenya bere a wagyae bɔ mpofirim no? Anka wɔn a wɔhwɛ no no betumi aka sɛ Daniel suro onipa na ɔhene no mmara korɔn sen Yehowa mmara. (Dwom 118:6) Nanso Daniel de ne nneyɛe kyerɛe sɛ ɔsom Yehowa nkutoo. (Deuteronomium 6:14, 15; Yesaia 42:8) Nokwarem no, bere a na Daniel reyɛ eyi no, wamfa animtiaabu ammu ɔhene no mmara no so. Nanso, ogyinaa pintinn de kyerɛe nso sɛ na onsuro. Daniel kɔɔ so bɔɔ mpae wɔ n’abansoro dan mu ‘sɛnea ɔyɛ kan no ara’ ansa na ɔhene no rehyɛ mmara no.
27. Ɔkwan bɛn so na Onyankopɔn asomfo a wɔwɔ hɔ nnɛ no betumi ayɛ wɔn ade sɛ Daniel wɔ (a) brɛ a wɔbrɛ wɔn ho ase ma atumfoɔ a wɔkorɔn no mu? (b) Onyankopɔn a wobetie no sɛ sodifo asen nnipa mu? (d) mmɔden a wɔbɔ sɛ wɔne nnipa nyinaa bɛtra asomdwoe mu no mu?
27 Onyankopɔn asomfo a wɔwɔ hɔ nnɛ betumi asua biribi afi Daniel nhwɛso no mu. ‘Wɔbrɛ wɔn ho ase hyɛ atumfoɔ a wɔkorɔn no ase,’ na wodi ɔman a wɔte mu no mmara ahorow so. (Romafo 13:1) Nanso, sɛ onipa mmara ne Onyankopɔn de bɔ abira a, Yehowa nkurɔfo si gyinae a Yesu asomafo a wɔde akokoduru kaa nea edi so yi sii no: “Ɛsɛ sɛ yetie Onyankopɔn mmom sen nnipa.” (Asomafo no Nnwuma 5:29) Sɛ Kristofo reyɛ saa a, wɔnhyɛ atuatew ho nkuran. Mmom no, wɔn botae ara ne sɛ wɔne nnipa nyinaa bɛtra asomdwoe mu na ama ‘wɔatra ase komm, na wɔn ho adwo wɔn, onyamesom pa mu.’—1 Timoteo 2:1, 2; Romafo 12:18.
28. Ɔkwan bɛn so na na Daniel som Yehowa “daa”?
28 Dario kaa mprenu sɛ Daniel resom Onyankopɔn “daa.” (Daniel 6:16, 20) Aram asɛmfua a wɔkyerɛɛ ase “daa” no kyerɛ sɛ “wubetwa wo ho frɛdɛfrɛdɛ.” Ekura adwene a ɛne sɛ biribi di kyinhyia bere nyinaa anaa ɛkɔ so daa. Na Daniel nokwaredi te saa. Na ɔbɛyɛ saa daa wɔ ɔkwan biara so. Sɛ Daniel hyia sɔhwɛ kɛse anaa ketewa a, na onim nea ɔbɛyɛ pefee. Na ɔbɛkɔ so ayɛ ade a ɔyɛ mfe pii no—obedi nokware ama Yehowa.
29. Ɔkwan bɛn so na Yehowa asomfo a wɔwɔ hɔ nnɛ betumi anya Daniel nokwaredi no so mfaso?
29 Onyankopɔn nnɛyi asomfo pɛ sɛ wosuasua Daniel. Nokwarem no, ɔsomafo Paulo tuu Kristofo nyinaa fo sɛ wonsusuw tetefo a na wosuro Onyankopɔn no nhwɛso ho. Wɔnam gyidi so “dii asɛntrenee, nyinyaa bɔhyɛ”—ɔretwe adwene asi Daniel so—na ‘wosiw agyata ano.’ Sɛ Yehowa asomfo a wɔwɔ hɔ nnɛ no, momma yɛnna gyidi adi te sɛ Daniel na yɛnyɛ nea ɔyɛe no bi daa, na ‘yɛmfa boasetɔ ntu mmirika a ɛda yɛn anim no.’—Hebrifo 11:32, 33; 12:1.
^ nky. 7 Tete nkyerɛwee mu adanse a ɛkyerɛ sɛ na Apuei fam ahene taa yɛn nkekaboa wɔ mmoa yɛmmea no si so dua sɛ na “agyata amoa” wɔ Babilon.
^ nky. 12 Na abansoro dan no yɛ dan a obi tumi kɔhome wom bere a ɔmpɛ sɛ afoforo haw no no.
^ nky. 16 Ɛbɛyɛ sɛ na agyata amoa no wɔ asase mu a ano hwɛ soro. Ebetumi aba sɛ na apon anaa nkataso a wotumi ma so ma mmoa no hyɛn mu nso da ano.
^ nky. 20 Asɛmfua ‘anototo’ no fi Aram kasa a wobetumi akyerɛ ase nso sɛ “watwiriw no mu.” Eyi si adwemmɔne a na Daniel atamfo no wɔ so dua.
• Dɛn nti na Mediani Dario sii gyinae sɛ ɔbɛma Daniel dibea a ɛkorɔn?
• Pɔw bɔne bɛn na abirɛmpɔn ne amantam ahene no bɔe? Ɔkwan bɛn so na Yehowa gyee Daniel?
• Dɛn na wusua fii Daniel nokwaredi ho asɛm a wutiee no mu?
[Mfonini nkutoo na ɛwɔ kratafa 114]
Daniel som Yehowa “daa.” So woyɛ saa?
Share Share Wogyee No Fii Gyata Anom!
dp ti 8 kr. 114-127